ပငျပနျးလှနျးမက ပငျပနျးလာတဲ့အခါ အရာရာကို လှတျခလြိုကျဖို့တှေးတယျ … – Shinyoon
ပငျပနျးလှနျးမက ပငျပနျးလာတဲ့အခါ အရာရာကို လှတျခလြိုကျဖို့တှေးတယျ …
May 31, 2021 by Shin Yoon
လူတဈယောကျ ဘယျလောကျထိ ခံနိုငျရှိသလဲဆိုပွီး လူတခြို့က စမျးသပျခငျြကွတယျထငျပါတယျ …. တဈခါ ခှငျ့လှတျပေးလိုကျရငျ နောကျတဈကွိမျလဲ ခှငျ့လှတျလိမျ့မယျလို့ ထငျသှားတတျကွတယျ .. တဈခါ ကူညီပေးလိုကျရငျ အမွဲတမျးကူညီနလေိမျ့မယျဆိုတဲ့ စိတျကွီးစှဲသှားတယျ တဈခါ သညျးခံလိုကျရငျ အမွဲတမျး သညျးခံနမှောပဲဆိုပွီး အနိုငျကငျြ့ဖို့ တှေးကွတယျ …
လူလေ .. အသှေးအသားနဲ့ တညျဆောကျထားတာ ခုနျနတေဲ့ နှလုံးသား ရှိတယျ စီးဆငျးနတေဲ့ သှေးတှရှေိတယျ ခံစားတတျတဲ့ စိတျရှိတယျ တှေးတောတတျတဲ့ ဦးနှောကျရှိတယျ သညျးခံတယျ ဘယျလောကျထိ သညျးခံနိုငျမှာလဲ ဖိပါမြားရငျတော့ တှနျးကနျထှကျတဲ့ သဘောလိုပါပဲ သညျးခံရပါမြားရငျး ပငျပနျးလာတဲ့အခါ ဘယျသူ့မကျြနှာမှ မကွညျ့ပဲ ပေါကျကှဲတတျလာတယျ … အဲ့ဒီအခြိနျမှ လူဆိုးကွီးဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျတှမေတပျနဲ့ပေါ့ ….
ပူလောငျလှနျးမက ပူလောငျလာတဲ့အခါ ကိုယျ ရပျနတေဲ့ ဘယျအရပျကဖွဈဖွဈ ဘယျသူမဆို လှညျ့ထှကျဖွဈခဲ့မှာပါပဲ … မကျြနှာတှေ ကွညျ့ရတာ ပူလောငျလာတဲ့အခါ စကားတှပွေောနတော ပူလောငျလာတဲ့အခါ အဲ့ဒီအရပျမှာ ဘယျသူမှ ကွာကွာ ရပျမနနေိုငျတော့ဘူး … အေးခမျြးအောငျ မနနေိုငျသေးရငျတောငျ အရမျးပူလောငျလှနျးတဲ့အရပျတှမှောတော့ ဘယျသူမှ ကွာကွာမနခေငျြကွပါဘူး
ဆှဲထားရတာ ပငျပနျးလာတဲ့အခါကရြငျတော့ … ကိုယျဘယျလောကျပဲ မွတျနိုးတဲ့အရာပဲဖွဈဖွဈ လကျလှတျပေးလိုကျမှာပါ … ခဈြခွငျးမတ်ေတာဟာ အေးမွတယျဆိုပမေယျ့ ကိုယျ့ကို မခဈြတဲ့သူကို ခဈြနမေိခွငျးက သိပျကို ပငျပနျးစတေယျဆိုတာ ခဈြဖူးသူတိုငျးပဲသိပါတယျ အနားနခေငျြပမေယျ့လို့ နာကငျြလာရတဲ့အခါ ဆကျလြှောကျရမှာကို ကွောကျတတျလာတယျ
ကငျဆာမှ ကြှမျးတတျတာမှ မဟုတျပဲလေ နှလုံးသားမှာ သိမျးထားမိတဲ့ နာကငျြမှုတှကေလဲ နှလုံးသားကို လောငျကြှမျးစပေါတယျ မီးတောကျတှေ မထှကျပမေယျ့လို့ ပူရတတျတယျ …. ပငျပနျးလှနျးမက ပငျပနျးလာတဲ့အခါ ဘယျအရာကိုမှ မပိုငျရတော့မယျ့အတူတူ ဘယျအရာကိုမှ မပိုငျခငျြတော့ပဲ လှတျခလြိုကျမိမှာပါ ။
ပင်ပန်းလွန်းမက ပင်ပန်းလာတဲ့အခါ အရာရာကို လွှတ်ချလိုက်ဖို့တွေးတယ် …
လူတစ်ယောက် ဘယ်လောက်ထိ ခံနိုင်ရှိသလဲဆိုပြီး လူတချို့က စမ်းသပ်ချင်ကြတယ်ထင်ပါတယ် …. တစ်ခါ ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ရင် နောက်တစ်ကြိမ်လဲ ခွင့်လွှတ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်သွားတတ်ကြတယ် .. တစ်ခါ ကူညီပေးလိုက်ရင် အမြဲတမ်းကူညီနေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကြီးစွဲသွားတယ် တစ်ခါ သည်းခံလိုက်ရင် အမြဲတမ်း သည်းခံနေမှာပဲဆိုပြီး အနိုင်ကျင့်ဖို့ တွေးကြတယ် …
လူလေ .. အသွေးအသားနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာ ခုန်နေတဲ့ နှလုံးသား ရှိတယ် စီးဆင်းနေတဲ့ သွေးတွေရှိတယ် ခံစားတတ်တဲ့ စိတ်ရှိတယ် တွေးတောတတ်တဲ့ ဦးနှောက်ရှိတယ် သည်းခံတယ် ဘယ်လောက်ထိ သည်းခံနိုင်မှာလဲ ဖိပါများရင်တော့ တွန်းကန်ထွက်တဲ့ သဘောလိုပါပဲ သည်းခံရပါများရင်း ပင်ပန်းလာတဲ့အခါ ဘယ်သူ့မျက်နှာမှ မကြည့်ပဲ ပေါက်ကွဲတတ်လာတယ် … အဲ့ဒီအချိန်မှ လူဆိုးကြီးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေမတပ်နဲ့ပေါ့ ….
ပူလောင်လွန်းမက ပူလောင်လာတဲ့အခါ ကိုယ် ရပ်နေတဲ့ ဘယ်အရပ်ကဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူမဆို လှည့်ထွက်ဖြစ်ခဲ့မှာပါပဲ … မျက်နှာတွေ ကြည့်ရတာ ပူလောင်လာတဲ့အခါ စကားတွေပြောနေတာ ပူလောင်လာတဲ့အခါ အဲ့ဒီအရပ်မှာ ဘယ်သူမှ ကြာကြာ ရပ်မနေနိုင်တော့ဘူး … အေးချမ်းအောင် မနေနိုင်သေးရင်တောင် အရမ်းပူလောင်လွန်းတဲ့အရပ်တွေမှာတော့ ဘယ်သူမှ ကြာကြာမနေချင်ကြပါဘူး
ဆွဲထားရတာ ပင်ပန်းလာတဲ့အခါကျရင်တော့ … ကိုယ်ဘယ်လောက်ပဲ မြတ်နိုးတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်လွှတ်ပေးလိုက်မှာပါ … ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ အေးမြတယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ကို မချစ်တဲ့သူကို ချစ်နေမိခြင်းက သိပ်ကို ပင်ပန်းစေတယ်ဆိုတာ ချစ်ဖူးသူတိုင်းပဲသိပါတယ် အနားနေချင်ပေမယ့်လို့ နာကျင်လာရတဲ့အခါ ဆက်လျှောက်ရမှာကို ကြောက်တတ်လာတယ်
ကင်ဆာမှ ကျွမ်းတတ်တာမှ မဟုတ်ပဲလေ နှလုံးသားမှာ သိမ်းထားမိတဲ့ နာကျင်မှုတွေကလဲ နှလုံးသားကို လောင်ကျွမ်းစေပါတယ် မီးတောက်တွေ မထွက်ပေမယ့်လို့ ပူရတတ်တယ် …. ပင်ပန်းလွန်းမက ပင်ပန်းလာတဲ့အခါ ဘယ်အရာကိုမှ မပိုင်ရတော့မယ့်အတူတူ ဘယ်အရာကိုမှ မပိုင်ချင်တော့ပဲ လွှတ်ချလိုက်မိမှာပါ ။
၁၅၀၀ အခဈြပဲ ဖွဈဖွဈ ၅၂၈မှာပဲ ဖွဈဖွဈ ပိုပွီးတှယျတာမိသူက ပိုပွီးနာကငျြရတတျပါတယျ …
ခဈြတတျတဲ့သူတှကေ ပိုပွီး ပွတျသားတတျကွတာကိုတော့ သိထားပါ